Cali Maxamed Warancadde, Oo Ka Hadlay, Waayo-aragnimada Golaha Wasiirada M/wayne Biixi Iyo Musuq-maasuqii Lagu Eedeeyay Wasiiradii M/wayne Silanyo | Marsa News
Cali Maxamed Warancadde, Oo Ka Hadlay, Waayo-aragnimada Golaha Wasiirada M/wayne Biixi Iyo Musuq-maasuqii Lagu Eedeeyay Wasiiradii M/wayne Silanyo
Hargaisa:(Marsanews) La Taliyaha gaarka ah ee Madaxweynaha, mudane Cali Maxamed Warancadde oo u waramay Wargeyska Geeska Afrika ayaa ugu horeyn isagoo ka hadlaya Soomaaliya waxa uu yidhi “Runtii Somaliya wax wanaag ah oo ay inoo hayso ma jirto, caalamkuna waa uu ogyahay, waanu ka war qabaa. Dawladda Somaliya waxay wadaa cadaawad ka dhan ah Shacabka reer Somaliland, haddii ay tahay Madaxweynaha iyo haddii ay tahay Maamulka Xamarba, wax horumar ah oo ay habayaraato ee ay inoo ogolyihiin ma jirto, wanaag iyo horumarna inooma ogola, dhibaato iyo dibin-daabyo ayey mar walba inala doonayaan, laakiin waxba inagama faa’iidayaan, waxna inama yeeli karaan, wax la inoo soo marinayaana ma jiro. Duniduna wey ka dharagsan tahay sidaynu maanta kala nahay, laba dal baynu kala nahay.
Mar aanu wax ka weydiinay aragtidiisa ku waajahan wada hadalada Somaliland iyo Somaliya ee hakadku ku yimid ayaa uu ku jawaabay “Inagu haddii aynu nahay Somaliland, diyaar ayeynu u ahayn wada hadalada Soomaaliya, Madaxweynaheenuna dhawr jeer buu sheegay, oo uu caddeeyey, waxaana laga wada hadlayaa sidii wanaag iyo ixtiraam loogu wada noolan lahaa gobolka Geeska Afrika.
Waddada kaliya ee maanta banaanina waa taas, taasna waxaan runtii u arkaa inay Somaliland iyo Somaliyaba dan u tahay, sababtoo ah dawladda Somaliya waa dawlad ku kooban magaalo kaliya, oo aynu ka war qabo in aanay xittaa gacanta ku wada hayn, halka Somaliland ay ka jirto Dawlad qaybaheedii kala duwanaa u dhamaystiran yihiin, oo ciidankeedii u dhisan yahay, golayaasheedii u dhisan yihiin, Shacabkeedii mar walba hiil iyo hooba la garab joogaan.
Mar aanu wax ka weydiinay sida uu arko maamulka Hawada Somaliland ee Somaliya lagu wareejiyey ayaa ku jawaabay “Arintaasi waxba kama jiraan, waxna ka socon mayaan. Anigu sida aan qabo, hawadeena inaga ayaa leh, inaga lama wareegi karaan.
Heshiiskii hore loogu heshiiyey, ee Turkiga ka dhacay, haddii ay Somaliya ka baxday, inaga ayaa u madaxbanaan maamulka Hawadeena, waxaynu leenahay, oo qasab la inoogu maamuli karaa ma jirto, arintaasina waa arin sharci daro ah, balse u suurtagali mayso”.
Cali Maxamed Waran-cadde mar aanu wax ka weydiinay sida uu u arko tabashada Saami qaybsiga ee beelaha darafyada ayaa ku jawaabay “Saami qaybsigu Golaha ayey u taala, golaha Barlamaanka ayaa wada, waxaana loo baahan yahay in si caqliyana loo eego wixii tabasho ah, waxaana anigu qabaa in uu goluhu arintaas xal u helo. Haddii ALLE yidhaah.
Mudane Warancadde oo muddo dheer xilal wasaaradeed oo kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyey ee Somaliland, ayaa ka hadlay doodda ah in xukuumadda madaxweyne Biixi ay ku jiraan dhalinyaro aan waayo-arag ahayni, “Kolayba dadka la magacaabayo wax baa lagu xushaa, Wasiir Wasiirnimada ku dhashayna ma jiro. Wasiir walbana waxa laga yaaba in isaga oo hore u soo shaqeeyey ama aan hore u soo shaqayn oo cusub la doorto, markaas Wasiir walba wuxuu la soo baxo iyo kartidiisa ayey ku xidhan tahay.
Qof kastaaba nolosha iyo shaqada ayuu wax ku noqdaa, oo uu wax ku bartaa.
Mar uu ka hadlaayey Shirka Ceel-afweyn iyo qodobadii ka soo baxay ayaa yidhi “Shirku si aad iyo aad u wanaagsan oo milgo leh ayuu ku soo dhammaaday, labadii beeloodna waa lagu heshiisiyey, Shirkana runtii Somaliland oo dhan baa gashay, Culimo, Madax-dhaqameed, Wax-garad iyo Siyaasiyiinba, waana uga mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geystay, Shirkan iyo qabsoomidiisa, Somaliland doorkan may kala hadhin, waxaana halkaas la iskugu tagay, oo loo soo gurmaday sidii labadan Beelood looga dhex dhalin lahaa nabad, colaadoodana meesha looga saari lahaa, ta kale ninkaas odayga ah ee inamadiisa la dilay, ee saamaxada la yimid, waa nin aad iyo aad u qiimo badan, waa nin samray, oo si wanaagsan u samray, wanaagaas iyo nasteexaas uu horseedka ka noqdayna ALLE ayuu khayr iyo ajar kaga heli doonaa.